I-Cranny Cottage Carnlough
Indawo entle esandula ukulungiswa ekwintliziyo yelali yaseCarnlough, ebekwe ecaleni kwendlela yeCauseway Coast ebekwe phakathi kweyona ndawo iphezulu yokujonga i-50 yehlabathi.
Ipropathi ibekwe kufutshane neCarnlough Harbour kunye nokuhamba imizuzu emi-5 ukusuka elunxwemeni lwaseCarnlough. Isakhiwo samatye esithambileyo esenziwe saphuculwa ukuba siquke bonke ubunewunewu bale mihla, likhaya lokwenyani ukusuka ekhaya. Isitayile sepropathi sipholile kwaye sizolile kwaye sinomxholo ofihlakeleyo we-nautical ukuxhasa indawo yayo yolwandle.
Ngemigangatho yamatye kuyo yonke indawo, umgangatho ongezantsi yindawo yentlalontle, ekhululekileyo kwaye ezolile ukonwabela ikofu yasekuseni okanye uzipholele, uhlale ubukele imuvi ngokuhlwa. Igumbi lokuphumla lixhotyiswe ngokupheleleyo ngeesofa ezihleliyo, itafile yekofu, umabonwakude kunye nebar yesandi.
Ikhitshi linazo zonke izixhobo eziyimfuneko kunye nezibonelelo zokuba ukonwabele ukuhlala kwakho, umatshini wekofu, umatshini wokuhlamba izitya, i-microwave, i-cooker, isikhenkcisi sefriji kunye nesinki entle yaseBelfast.
Phezulu ligumbi lokulala elikhulu, igumbi lesibini kunye negumbi lokuhlambela.
Igumbi lokulala elikhulu-imigangatho yeplanga epeyintwe yesiNtu, ibhedi ephindwe kabini kunye newodrophu
Igumbi lokulala lesibini - Imigangatho yeplanga epeyintiweyo yesiNtu, iibhedi ezilalayo, isifuba sedrowa kunye nendawo encinci yewadilophu.
Igumbi lokuhlambela - Umgangatho ofakwe iithayile, isiporo sethawula esifudunyeziweyo, ibhafu yobungakanani obugcweleyo kunye neshawa entloko yemvula, indlu yangasese kunye nesitya
Igumbi lokuhlambela impahla-Umatshini wokuvasa ubungakanani obugcweleyo kunye nesomisi, esinentsimbi, ibhodi yokuayina kunye nebhaskithi yokuhlamba impahla. Indlu yangasese yesibini kunye nesitya.
Igadi yindawo ethandekayo yokuphumla kuyo, ijonge emazantsi kwaye ikhuselwe ngokujonga iigadi ukuya elwandle.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Carnlough